Ithegi: ukhetho lwabathengisi | Martech Zone
Ithegi: ukhetho lwabathengisi
Uphengululo lweSoftware, Ingcebiso, Ukuthelekisa, kunye neeNdawo zokuFumanisa (izixhobo ezingama-65)
Lwesine, Matshi 11, 2021 NgoLwesithathu, Juni 2, 2021 Douglas Karr
Abantu abambalwa bayazibuza ukuba ndikwazi njani ukufumana uluhlu olubanzi lokuthengisa kunye neqonga lobuchwephesha bokuthengisa kunye nezixhobo phaya ababengekaziva ngazo, okanye ezinokuba ze-beta. Ngaphandle kwezilumkiso endizisetileyo, kukho izibonelelo ezithile ezilungileyo phaya zokufumana izixhobo. Kutshanje bendisabelana ngoludwe lwam noMateyu Gonzales kwaye wabelana ngezinto ezimbalwa kuye kwaye zaqala ngam
Inokuba yintoni ifuthe ukuba inqaba yakho yetekhnoloji iye yawa emhlabeni? Ingumbono ondibethileyo ngeMigqibelo embalwa edlulileyo njengoko abantwana bam bebedlala iJenga ngelixa bendisebenza kumboniso omtsha malunga nokuba kutheni abathengisi kufuneka baphinde bacinge ngobugcisa babo. Undibethile ukuba ubuchwephesha beeteknoloji kunye neenqaba zeJenga eneneni zinokufana. UJenga, ewe, udlalwa ngokufumba iibhloko zomthi kude kube kuphelele
Izinto ekuthengeni iqonga lokuzenzekelayo lokuthengisa
Lwesine, Disemba 29, 2016 Douglas Karr
Zininzi kakhulu iinkqubo zokuthengisa ezizenzekelayo phaya… kwaye uninzi lwazo luzichaza njengorhwebo lokuzenzekelayo olunenqanaba elahlukileyo lezinto ezixhasayo. Okwangoku, sibukele iinkampani ezininzi zisenza iimpazamo ezinkulu ekusebenziseni imali eninzi kakhulu, ixesha elininzi kakhulu okanye ukuthenga isisombululo esingalunganga ngokupheleleyo. Ngokukodwa kwitekhnoloji yentengiso, sihlala sibuza imibuzo embalwa kwinkqubo yokukhetha umthengisi: Leliphi ithuba olibonayo
Iimpawu zeArhente kunye nokuziphatha okufunwa zii-CMOs
NgeCawa, uJuni 5, 2016 Douglas Karr
Ukuba ne-arhente kuye kwanomvuzo kwaye kwaba ngumceli mngeni. Kwingcambu yako konke esikufezekisayo kubaxhasi bethu, sisakuthanda ukunceda ukuhambisa abathengi ngemodeli yokuvuthwa kwentengiso. Isenza ukuba sisebenze kunye neziqalo kunye nabaxumi kumashishini ngokufanayo, ngokukhulisa ngobuchule ulwazi lwabo kunye nengeniso kwi-intanethi. Into endingakhange ndiyiqonde kukuba ingakanani utshintsho kuthi, njengearhente, ekufuneka siyenzile ukuze sihlale siphambili kumagophe kwaye sihlale sikhuphisana